Echiche Windows 11 Ọ dị mma karịa Windows 10? | Akụkọ Windows
Echiche Windows 11 Ọ dị mma karịa Windows 10?
Ụlọ Ignatius | | Noticias, Windows 11
Site na etiti afọ 2021, Windows 11 dị ugbu a n'efu gbaa ndị ọrụ niile ahụ nwere otu Windows 10 na onye akụrụngwa na-ezute usoro nke kacha nta chọrọ, ọ bụ ezie na nke na-emetụta processor na mgbawa TPM nwere ike ịbụ wụ eluọ bụ ezie na akwadoghị ya.
Ọ bara uru ịkwalite na Windows 11? Ọ bụrụ na ị ka na-edochaghị anya ma ọ bara uru ịkwalite ma ọ bụ ịzụta kọmputa ọhụrụ ma ọ bụrụ na nke gị adabaghị na-ekpori ndụ Windows 11, n'isiokwu a, anyị ga-agbalị ikpochapụ obi abụọ gị.
3 Melite arụmọrụ desktọpụ
4 Jiri ngwa wijetị mee ihe
5 Wụnye Ngwa gam akporo
6 Ọ bara uru ịkwalite na Windows 11?
Ọ bụrụ na anyị leba anya na ihe ndị Windows 11 chọrọ, anyị nwere ike lelee ka opekempe chọrọ iji nwee ike ịnụ ụtọ sistemụ arụmọrụ a. Ha na-adị ka nke Windows 10, ma na ụfọdụ adịghị ike, ebe ọ na-achọ a 64-bit processor.
Ọ bụrụ na kọmputa gị na-arụ ọrụ nke ọma na Windows 10 ma dakọtara na Windows 11, ị gaghị achọpụta nsogbu arụmọrụ ma ọ bụ nkwụsi ike ọ bụla. Buru n'uche na a na-ewu Windows 11 na ntọala nke Windows 10, ma na-agụnye ihe ọrụ dị iche iche, mana otu ọ si arụ ọrụ bụ otu ihe ahụ.
Ọ baghị uru ikwu Ọ bụrụ na ị nwere SSD kama draịva siri ike (HDD) Ahụmahụ arụ ọrụ ga-adị nro karịa na sistemụ arụmọrụ abụọ ahụ.
Otu n'ime Windows 11 ndị na-emepụta interface kwuru na ha kpebiri ịgbanwe ụzọ ọrụ ọrụ ahụ si arụ ọrụ imeghari na nlekota oru ugbua, panoramic na nnukwu nlekota nke na-amanye onye ọrụ ịkwaga echiche gaa n'aka ekpe iji nwee ike ịmekọrịta ma ngwa na menu mmalite.
Na Windows 11, akara ngosi ọrụ niile dị n'etiti, yana bọtịnụ mmalite. N'ụzọ dị otu a, oge ọ bụla anyị chọrọ imekọrịta ya, imepe ngwa ma ọ bụ ụzọ mkpirisi, anyị agaghị ebuli isi anyị.
Ọ bụ ezie na ọ pụrụ iyi ihe na-adịghị mkpa, dabere na nha ihuenyo kọmputa gị, ị nwere ike ịlele ihe nke a pụtara. Ozugbo ị nwara ya, ị ga-ahụ ka echiche nke itinye ngwa na bọtịnụ mmalite dabere na taskbar bụ echiche magburu onwe ya.
Melite arụmọrụ desktọpụ
Windows 11 gụnyere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mmezi nke na-abụghị kpọmkwem maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ na otu ngwa na ihuenyo, kama maka ndị na-etinye ọtụtụ awa n'ihu kọmputa na ndị, ​​na mgbakwunye, jiri ihe karịrị otu ngwa rụọ ọrụ n'otu oge yana iji kọmpụta abụọ ma ọ bụ karịa.
Na Windows 11, anyị nwere ike hazie nke ọ bụla nke desktọpụ na anyị nwere na akụrụngwa anyị nke mere na, na-akpaghị aka, etinyere ngwa ndị ahụ n'ime ya.
Otu esi emepụta desktọọpụ ọhụụ na Windows 10
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị nwere desktọpụ 3, oge ọ bụla anyị mepere ngwa dị iche, a ga-etinye ya na desktọpụ ebe ọ dị. oge ikpeazụ anyị gbara ya. N'ụzọ dị otú a, mgbe anyị chọrọ iji ya, anyị ga-enweta naanị na desktọpụ ebe anyị maara na ọ bụ site na mkpirisi keyboard.
Ọ bụrụ na anyị anaghị eji desktọpụ dị iche iche, mana ọ bụrụ ndị ọzọ Monitors, anyị ga-ahụ otu ọrụ ahụ.
Jiri ngwa wijetị mee ihe
Na Windows Vista webatara wijetị. N'ụzọ dị mwute, ha enweghị ihe ịga nke ọma Microsoft tụrụ anya ya. Ọ bụghị naanị n'ihi arụrụ arụ arụrụ arụ nke Windows Vista n'ozuzu, kamakwa n'ihi na wijetị na-egbochi arụmọrụ nke kọmputa, na-enye ahụmịhe onye ọrụ jọgburu onwe ya.
Mgbe ewepụchara ha na Windows 7, Microsoft eweghachila ha na Windows 11. Mana, n'adịghị ka Windows Vista, wijetị na-arụ ọrụ n'ụzọ dị iche na nke jikọtara kpamkpam na sistemụ.
Daalụ maka wijetị, anyị nwere ike ịnweta ozi ihu igwe, ebumnuche anyị, ndepụta ọrụ, ozi ịntanetị a na-agụghị yana ozi webụsaịtị. na anya na ihuenyo.
Wụnye Ngwa gam akporo
Ihe ọzọ dị mkpa ọhụrụ nke ga-abata na ọnwa ndị na-abịanụ bụ ohere nke tinye otu ngwa nke anyị na-ejikarị na ekwentị Android anyị na Windows 11.
N'ụzọ ahụ, ọ bụrụ na anyị akwụsịghị chọta ngwa PC nke na-egbo mkpa anyị, ma ọ bụrụ na anyị ahụla ya na gam akporo, anyị nwere ike iji ụdị ahụ n'enweghị nsogbu ọ bụla, na-emekọrịta ọdịnaya mgbe niile site na Google.
Ọ bara uru ịkwalite na Windows 11?
N'isiokwu a, anyị ekwuola banyere isi ihe na-adọrọ mmasị anyị ga-ahụ na Windows 11, na imewe bụ ihe kasị mkpa na nke, ruo ogologo oge, ga-abụ. naanị ihe kpatara iji kwalite na ụdị Windows ọhụrụ a.
Ọ bụrụ na imewe ahụ kacha amasị gị, Microsoft na-enye anyị ohere ịgbanwe nhazi ahụ wee gosipụta ya Otu ntọala ntọala dị ka ọ dị na Windows 10. Agbanyeghị, ọ baghị uru ịgbanwe ya mana ịmara ya, ebe ọ bụ na nke a bụ imewe Windows ọhụrụ site ugbu a gawa.
Ọzọkwa, ma macOS na ọtụtụ nkesa Linux, na-enye anyị otu imewe, na ihe niile dị na taskbar etinyere na etiti. Gbalịa mee ya ma ị ga-ahụ otú nhazi ọhụrụ a si kwenye gị na njedebe.
N'ụzọ dị mwute, mwakpo Ransomware aghọọla karịa ka ọ dị na mbụ n'etiti ụdị ụlọ ọrụ niile. Daalụ TPM mgbawa, Microsoft chọrọ igbochi sọftụwia ọ bụla inwe ike ibunye kọmputa wee gbasaa ngwa ngwa n'ofe netwọkụ.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na gburugburu ụlọ ọrụ, nchekwa nke data gị bụ ihe ị na-apụghị ileghara anya. Ọ bụghị naanị na-eme nkwado ndabere na mpaghara kwa ụbọchị, kamakwa na-echebe akụrụngwa gị maka ngwọta nke Windows 11 na-enye site na iji mgbawa TPM 2.0.
TPM modul bụ mgbawa etinyere na motherboard (nke ọ bụrụ na akụrụngwa anyị etinyeghị ya, enwere ike ịgbakwunye ya ma emechaa), ebumnuche ya bụ inye aka. chedo igodo nzuzo, nzere onye ọrụ na data ndị ọzọ mmetụta n'azụ ngwaike.
N'ụzọ nke a, na-emepụta ihe mgbochi na ngwa ngwa enweghị ike ịwụli elu iji nweta data a. Ụdị TPM 1.0 echebeghị megide algọridim nke cryptographic dị ka ọkaibe dị ka ndị ejiri ugbu a na ụdị ọgụ a.
N'ihe karịrị ọnwa 6 n'ahịa (n'oge ebipụtara akụkọ a), Windows 11 na-arụ ọrụ nke ọma, ya bụ, na ọ nweghị nsogbu ọ bụla na-arụ ọrụ nke na, ọ bụrụ na e nyere nsụgharị nke mbụ, ọ bụ ya mere na ọ dịghị mma ịwụnye nsụgharị mbụ nke sistemụ arụmọrụ, karịsịa ma a bịa na kọmputa eji arụ ọrụ. .
Pathzọ zuru ezu na edemede: Windows News » General » Noticias » Echiche Windows 11 Ọ dị mma karịa Windows 10?
Ngwọta maka "Windows gbochiri sọftụwia a n'ihi na ọ nweghị ike ịchọpụta onye nrụpụtara"
Otu esi eweghachi Windows 10 na ebe eweghachite gara aga